Daawo Muuqaal Cadeynaya Beenta Nimco Dareen ee Sheegashada Heesta Booli - iftineducation.com
iftineducation.com – Nimco Dareen oo ah Fanaanad Fanka Socod Barad ku ah dadkuna ay aad u Jecelyihiin ayaa caadeysatay in ay Sheegato Heeso ay horey ugu Luqeeyeen Fanaaniin Magac iyo Maqaam ku dhex leh Bulshada, Kuwaasi oo ay kamid yihiin Fanaanada Marwo Cabdi Axmed oo horey u qaaday Heeskii BOOLI, iyo Fanaanada Hibo Maxamed Hudoon oo loogu magac daray Hido dowrta Hobolada.
Waxaa sanadkaan gudahiisa mar waraysi laga qaaday Fananada Nimco Dareen Sheegtay In aay heesta Deeq Caashaq ama booli aay ayada leedahay una sameeyay Wiil La yiraahdo Cabdulaahi Balse la ogaaday in aay heestaasi Leedahay Fanaanada Weyn ee Marwo Cabdi Axmed .
Sheegashada Nimco Dareen kuma sina heesta Booli balse waxaa jira, heeso fara badan oo aay ka mid yahiin heesta, Qandho oo aay ku luqayso Fanaanada Weyn ee Hibo Nuura Heesta, Telefon Wax iima taro, iyo heeso fara badan oo aay horay ugu luuqeyn fanaanin ka magac iyo maamusba ku leh Bulshada.
Nimco Dareen dadka waxaa aay waydiiyeen hadii aay Indha, adeegan ku sii socato in aay shegashadeeda gaari doonto in aay ayada leedahay Soomaliyey Tooso.
Hadaba waxaa maanta idin soo bandhigayna Heesta, Booli iyo waliba cid iska leh Miraha Iyo Heesta waa Deeq caashaq waxa Erayada leh Hassan ganeey Laxanka Ahmed gaceyte iyo Codkii Marwa Cabdi Ahmed.
Daawo Heesta Booli Iyo Cida sida Dhabta Ah u Leh
Newzealand oo qorsheyneysa wadankeeda inaan tubaako lagu arak.